सचिवालय बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
तपाईं अहंकारी हुनुभएको छ, पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व छोड्नुपर्छ । – माधवकुमार नेपाल
पहिले तपाईं राजीनामा गर्नुहोस् अनि को, कसरी प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने पार्टी कमिटीले निर्णय गर्छ । – वामदेव गौतम
प्रधानमन्त्रीको काउन्टर प्रस्ताव : गौतमलाई प्रधानमन्त्री र नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष
वैशाख १८, २०७७ दुर्गा खनाल, बिनु सुवेदी
प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो राजीनामाको काउन्टर प्रस्तावका रूपमा वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
गौतमले यसअघि संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसबेला केही व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने कुरा जायज नहुने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको थियो । तर बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले नै गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरे । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई उपाध्यक्ष गौतमले चलाखीपूर्वक जवाफ दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले यो कुरा असल मनसायले ल्याउनुभएको हो भने ठीक छ तर पहिले तपाईं राजीनामा गर्नुहोस्, अनि को, कसरी प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने पार्टी कमिटीले निर्णय गर्छ,’ गौतमले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई पनि अध्यक्ष बनाउने गरी तीन जना अध्यक्षको अवधारणा राखेका थिए । जबकि दाहाल र नेपाल पक्षले ओलीसँग एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार दुवै चलाउन नसकेको निष्कर्ष लिएर पुगेका दाहाल र नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले थप अर्को अध्यक्षसमेत रहने खालको प्रस्ताव गरेपछि बुधबारको बैठक कुनै निष्कर्षमा पुगेन । वरिष्ठ नेता नेपालले आफूलाई तेस्रो अध्यक्ष होइन, ओलीलाई उल्टै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै छोड्न आग्रह गरे ।
झन्डै चार दिनयता आ–आफ्नो समूहमा छलफलपछि शक्ति सञ्चय गरी बुधबार बसेको सचिवालय बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तपाईंहरू बोल्नुहोस्, मेरो कुरा केही छैन’ भन्दै बैठकको सुरुवात गरे । स्रोतका अनुसार त्यसपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बोले । दाहालले आफ्नो कुरा बैठकमा राखिएको कुर्सीको पोजिसनबाट सुरु गरे । बैठकमा अध्यक्ष ओलीको कुर्सी छुट्टै र अरूको एउटा लहरमा राखिएको थियो । यसअघि बैठकमा पूर्ण अध्यक्षता गर्न नपाएको लगायतका प्रसंगबाट कुरा झिक्दै दाहालले अध्यक्ष भए पनि आफूलाई पटक–पटक अपमान गरिएको भन्दै ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘तपाईंले पार्टी एकताको स्पिरिट मार्दै जानुभएको छ,’ अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अध्यादेश पनि तपाईंले पार्टीलाई नै ध्यान दिएर ल्याउनुभएको हो । त्यसैले अब तपाईंले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’
दाहालले राजीनामाको प्रस्ताव गरेपछि ओलीले दाहालको कुरा टुंगिन दिएनन् । ‘अब म बोल्छु’ भन्दै आफ्नो धारणा राख्न सुरु गरे । उनले सुरुमै अध्यक्ष दाहालले लगाएका ‘आरोप खारेज गर्छु’ भने । त्यसपछि अगाडि बढ्दै उनले आफूलाई यस्तो बेलामा पनि काम गर्न नदिइएको गुनासो गरे । मुलुक कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा रहेको उल्लेख गर्दै यो बेला पार्टीभित्रबाट असहयोग भएको ओलीको धारणा थियो । त्यसपछि उनले वामदेव गौतमको प्रसंग अघि सार्दै उनले ‘प्रधानमन्त्रीका लागि किन हामी मात्रै ? वामदेव कमरेड पनि हुनुहुन्छ । उहाँलाई कोरोनाको संकटपछि प्रधानमन्त्री बनाऔं, राष्ट्रिय सभामा लैजाऔं’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रिय सभाबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने वा प्रतिनिधिसभाको कुनै स्थान खाली गर्न सकिने खालको कुरा गरेका थिए । त्यससँगै प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई पनि अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे । पार्टी विधानमा दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था भए पनि त्यसलाई संशोधन गरेर तेस्रो अध्यक्षसमेत बनाउन सकिने ओलीको धारणा थियो ।
ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री र नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बोलेका थिए । खनालले ओलीलाई ‘यस्ता नक्कली कुरा नगर्नुहोस्’ भनेको स्रोतले बताए । पार्टीले भन्छ भने राजीनामा दिन तयार हुनुपर्छ भन्दै उनले पनि ओलीको राजीनामाको प्रसंग उठाए । असन्तुष्ट नेताहरूले स्थायी कमिटी बैठक माग गरिरहेकाले जतिसक्दो छिटो त्यो बैठक बोलायो, त्यति राम्रो हुने उनको धारणा थियो । त्यसपछि अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बोलेका थिए । उनले ओली अहिले पनि अहंकारी देखिएको भन्दै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै छोड्न आग्रह गरे । उनले पार्टीभित्र ओलीको लोकप्रियता घट्दै गएकाले आफ्नो हैसियत बुझ्न भनेका थिए । ‘तपाईंको पपुलारिटी घटेको छ, तपार्इं अहंकारी हुनुभएको छ, अहिले पनि अहंकार देखिन्छ, तपाईंले पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व छोड्नुपर्छ, त्यसम्बन्धी निर्णय स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
त्यसपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बोलेका थिए । उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको अफरभित्रको मनसाय के हो भन्ने बुझ्न खोजेका थिए । उनले पहिले ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री को, कसरी बन्छ भन्ने स्पष्ट हुने धारणा राखेका थिए । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने यही बैठकबाट निर्णय गर्न उनले चुनौती दिएको स्रोतले बतायो ।
बैठकमा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेका सबै विवाद स्थायी कमिटीबाट टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै बैठक माग गरेका थिए । उनले पार्टीलाई विधिपद्धतिअनुसार हिँडाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यही बीचमा ओलीको मिर्गौला फेरियो । त्यो समयमा नेताहरू चुपचाप बसे तर केही तंग्रिनेबित्तिकै ओलीले आफ्नै पार्टीलाई समेत फुटका लागि सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । यस प्रकरणमा पार्टीमा कुनै छलफल भएन । ओलीले एकलौटी निर्णय गरे । जुन निर्णय ओलीका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । असन्तुष्टिका अनेक घटनाक्रमलाई जोडेर बसिरहेका नेताहरू अध्यादेश प्रकरणपछि विस्फोट भए र अहिले ओलीको औपचारिक रूपमा राजीनामा माग्ने तहमा पुगे । अप्ठेरोमा परेका उनले अब आउँदो बैठकसम्म कस्तो रबैया अपनाउँछन्, उनको पक्षमा उभिनेहरूको कस्तो सूची तय हुन्छ, त्यसले नेकपाभित्रको सम्भावित विग्रहको स्वरूप देखाउनेछ । प्रकाशित : वैशाख १८, २०७७ ०६:४०
नेकपा विवाद : कसरी आयो वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ?
वैशाख १७, २०७७ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमण सकिएपछि आफूले राजीनामा दिने र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमण सकिएपछि आफू तत्काल राजीनामा दिन तयार रहेको र त्यसपछि नेता गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । ओलीले चुनाव लडाएर वा संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभामार्फत पनि गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने बताएका थिए ।
बैठकको सुरुमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी र सरकारको आलोचना भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै अहिलेको निकास रहेको बताएका थिए । दाहालपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि राजीनामा दिएर निकास दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका थिए । नेता खनालले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।
सरकारको प्रतिष्ठा घटेकाले राजीनामा दिनु नै राम्रो हुने नेपालको भनाइ थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रस्ताव सुनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको वरीयता अपुग भएको भन्दै तीन जना पार्टी अध्यक्ष बनाएर नेपाललाई पनि अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिएर निकास दिन माग गरेको बैठक स्रोतले बतायो । तर, रामबहादुर थापा भने तत्काल प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विपक्षीमा उभिएका थिए ।
उपाध्यक्ष गौतमले विधि र प्रक्रियाबाट प्रस्ताव ल्याएर निर्णय गर्नुपर्ने माग राखे । त्यसपछि थप छलफल गर्ने भन्दै बैठक २० गतेसम्मका लागि टुंगिएको थियो । तर, बैठकपछि प्रवक्ताले भने, ‘सचिवालयको बैठकले यी सबै विषयमा अहिलेको आवश्यकतासँग मेल खाने, पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढाउने र जनादेशअनुसार सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उपयुक्त निर्णय लिनेछ र आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्नेछ । र, त्यही बैठकले नै माग भइआएको स्थायी कमिटी बैठकको पनि टुंगो लगाउनेछ ।’
विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला अचानक प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावलाई सचिवालयकका कतिपय नेताले दाहाल–नेपाल, गौतमलगायतको गठबन्धन भाँड्ने कोसिसको रुपमा बुझेका छन् । यद्यपि यसबारे थप निर्णय स्थायी कमिटी बैठकबाट हुने भएको छ । स्थायी कमिटीको बैठक २० गते बस्ने सचिवालय बैठकले तय गर्ने भएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख १७, २०७७ २३:२९